SIMINAARADA ONLINE KA AH
(Demo Account) Furo Akoon Rasmi ah
Badeecadaha leh khatar aad u saraysa
FxPRIMUS ahaan waxaan aaminsanahay samaynta xidhiidh shakhsiyeed oo aanu kula yeelo, la yeelano macaamiisheena qiimaha leh iyo shuraakadayada Idinka oo kasoo qaybgalaya munaasabadaha iyo seminaarada sar sare, waxaan abuurna fursad si aanu kuula kulano, dadka aanu u khidmayno ahoo aanu kaa caawinno horumarinta khibradahaaga ganacsi ama aragtiyaha ganacsigaaga
Nagu soo booqo, munaasabadaha kala duwan ee ka qabsooma caalamka oo idil, oo la kulan kooxahayga ugu sareeya ee aadka u mashquulka badan si ay kaagacaawiyaan inaad ka gaarto guul FXPRIMUS - Goobta ugu Ammaansan ee lagu Ganacsado.
NFP WEBINAR: BARO SIDA LOO JOOJIYO NAFTAADA GOOB SAX AH KA HOR NFP
Baro faa'idooyinka iyo khasaaraha ganacsi ee NFP iyo sida loo akhriyo filashooyinka adoo adeegsana natiijooyinkii hore iyo wararka taagan hadda.
luuqada Seminaarka: Ingiriisi
Sida loo diyaariyo ka ganacsiga NFP.
Sida loo joojiyo naftaada goob sax ah ka hor NFP.
Sida loo isticmaalo natiijooyinka hore ee NFP sida loo falanqeeyo natiijooyinka bishaan.
Ku soo biir falanqeeyayaashayada ka hor sii-daynta Warbixinta NFP si aad u ogaato waxa xogta bishaan ay macno uga samayn karto suuqyada.
Fadlan ogsoonow in webinar/seminaarka uu heli doono qofkasta isagoo codsiga soo weydiinasanya maamulaha akoonkooda.
BARO WAX BADAN DAAWO SEMINAARKA
Ka ganacsiga badeecadaha marginka leh waxaa weheliya khatar sare.
Wixii fikrad ah, warar, cilmi baaris ah, falanqayn, qiimayaasha ama macluumaad kale ee ay heshay FXPRIMUS waa kuwa bixiya faallooyinka guud ee suuqa kamana qayb noqdaan talo maalgashi.
Seminarkan, Stavros Tousios, Khabiirka Suuqa FXPRIMUS ayaa falaqayn doona mawduucyadan:
Qeexida iyo adeegsiga
Learn how to position yourself for the NFP with FXPRIMUS’ experienced Forex market specialist, Stavros Tousios. Baro faa'idooyinka iyo khasaaraha ganacsi ee NFP iyo sida loo akhriyo filashooyinka adoo adeegsana natiijooyinkii hore iyo wararka taagan hadda.
15-ka siminaar ee taxanaha ahi waxay caawin doonaan ganacsatada bilawga ah iyagoo ka heli doona faham buuxa suuqyada maaliyadeed, sidoo kalena
eray bixinta khaaska u ah ee aasaasiga ah iyo sharaxaadaha istiraatiijiyadyada maaliyadeed ee kakan.
Dhamaadka koorsadan, ka qayb qaatayashaadu waxay awoodi doonaa inay ku ganacsadaan saxnaan iyo kalsooni!
Taxanahan seminaarada ah waxa si gaar ah u heli kara haystaasha akoonada live ka ah ee FXPRIMUS. Fura akoon ganacsi maanta si aad u horumariso
Aqoontaada ganacsi ee aad leedahay kuna weheliyaan khubradahayada suuqu.
Ka hel taxanaha oo dhameystiran goobta xubnahahadda waxaa subtitle/caption laga helayaa luuqadahan Chinese, Malaysian, Thai, Arabic and Spanish.
Khabiirka Martida ah: Peter Petrou - Waxbadan ka baro Peter
Waa maxay forex Eeg >
Faa'iidooyinka ka ganacsiga Forex vs stocks-ka ama future Eeg >
Fahmidda xigashooyinka & Ka-ganacsiga Lacagaha waaweyn adoo haysta lacag yar Eeg >
Dilaalka suuqa samaynta & Taxliilinta Asaasiga/ farsameed Eeg >
Sagxad iyo Saqaf Eeg >
Janalada iyo Jiheeyaha Suuqa Eeg >
Sidee ganacsatadu u akhridaa sawirada shumacyada ah (CandleStick) Eeg >
Sida loogu isticmaalo ganacsiga Fibonacci Indicator Eeg >
Sida loogu ganacsado Moving Averages Eeg >
Sida loogu ganacsado MACD & PSAR indicators Eeg >
Sida loogu isticmaalo stochastics iyo RSI waqtigaaga ganacsiga Fiiri >
Sida ganacsatu u isticmaasho the Ichimoku Cloud Fiiri >
Pivot Points Fiiri >
Naqshadaha Sawirka Muhiimka u ah ku guulaysiga ganacsiga (Trading) Fiiri >
Sida loo sameeyo Istiraatiijiyadda Ganacsi ee Suuqa Sarifka Lacagaha Qalaad Fiiri >